Safal Khabar - 'जिल्लाका दुवै पार्टीका तत्कालिन अध्यक्षले नै नेतृत्व गर्ने गरि एकता टुग्यायौं'
सोमबार, २७ असोज २०७६ (Monday, 14 October, 2019)
'जिल्लाका दुवै पार्टीका तत्कालिन अध्यक्षले नै नेतृत्व गर्ने गरि एकता टुग्यायौं'
पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको ताजा अन्तर्वार्ता
सोमबार, ०९ बैशाख २०७६, ०७ : ३३
नेकपा सचिवालय वैठकले खास के निर्णय ग¥यो ?
हामीले जिल्लाको एकीकरणका सन्र्दभमा जिल्ला कमिटिका अध्यक्ष र सचिवको टुंगो लगाएका छौं । ७७ ओटै जिल्ला कमिटिको । आज सूचि पाउनुहुन्छ तपाईहरुले । काहा कुन जिल्लामा को अध्यक्ष र सचिव भए भन्ने सूचि पार्टीका तर्फवाट आज सार्वजनिक हुन्छ ।
जिल्लामा इन्चार्ज र सहइन्चार्ज को हुने भन्ने चँही टुगिएको छैन ?
त्यो विषयमा टुंगो लागेको छैन । केन्द्रीय नेताहरुको कार्यविभाजनका क्रममा मात्र यो विषय टुगो लाग्छ । त्यसकारण अहिले इन्चार्ज, सहइन्चार्ज टुगिएको छैन । अहिले अध्यक्ष र सचिव टुंगो लागेको हो ।
जनवर्गाीय संगठन, पोलिटब्यूरो गठनका विषयमा के भयो ?
जनवर्गीय संगठनको एकता पनि वाकी छ । हामीसँग २२ ओटा जनवर्गीय संगठन छन्, तिनिमध्ये केहीको एकता भईसकेको छ । तर पनि मुख्य जनवर्गीय संगठनको एकता भएको छैन । त्यो पनि वाकी छ । पोलिटब्यूरो गठन गर्ने सहमति भएको छ । विधानमा पनि ब्यवस्था छ । त्यो पनि अव छिटै हुन्छ । त्यो टुंिगन्छ । पहिला यो जिल्लाको कठिनाई थियो टुग्याउन । जिल्लाको टुग्गियो । यसले गर्दा एकीकरण वेसिकल्ली (आधारभूत) रुपमा टुगियो ।
मापदण्डका विषयमा विविध विचारहरु थिए, एकीकरणका क्रममा, अहिले कुन मापदण्ड र विधिका आधारमा एकता प्रक्रिया टुंगो लगाइयो त ? यो विषय सर्वत्र चासोको विषय पनि छ ।
मापदण्ड के वनाइयो भने जुन जुन जिल्लामा एमालेको नेतृत्व प्राप्त भयो, हिजो जुन कमिटिको अध्यक्ष जो थियो, निर्वाचित अध्यक्ष , अहिले पनि अध्यक्ष प्राप्त हुदा उसैले गर्ने, सचिव हुदा पनि त्यसैले गर्ने भन्ने समझदारीका आधारमा एकता प्रक्रिया टुगो लगाएका छौं । जिल्लामा अध्यक्ष र सचिव दुई जना पदाधिकारी हुन्छन्, नेतृत्व एमालेले प्राप्त गरेको ठाउमा एमालेको अध्यक्ष र माओवादीको जो जिल्लामा संगठन प्रमुख छ, ऊ चही सचिव हुने भयो । यस्तै माओवादीले पाएकोमा अध्यक्ष त्यसैगरि र सचिव पनि त्यसै गरि टुंगो लगाएका छौं ।
जिल्ला मा पनि तत्कालिन पार्टीका वीचमा भागवन्डा भएको होला नी, कति जिल्लाको नेतृत्व पूर्व एमाले र कति जिल्लाको नेतृत्व पूर्व माओवादीले गर्ने छन् ?
जिल्ला नेतृत्वका विषयमा करिव ४५ आसपासको नेतृत्व तत्कालिन एमाले र वाकी जिल्लाको नेतृत्व तत्कालिन माओवादीले नेतृत्व् गर्ने गरि भागवन्डा लगाइएको छ।
जिल्ला नेतृत्व चयन गर्न वनाइएको मापदण्ड जनवर्गीय संगठनको एकता गर्दा पनि लागु हुन्छन की अन्य खालको मापदण्ड वन्छ ?
जिल्लाको नतेृत्व चयनको मापदण्ड जनवर्गीय संगठनको नेतृत्व चयनमा लागु हुदैन । जनवर्गीय संगठनको एकताका लागि अलग्गै मापदण्ड वन्छन् । जनवर्गीय संगठन आम वेसमा रहेको संगठन हरु हुने भएकाले त्यसमा फरक खालको मापदण्ड वनाउनु पर्ने हुन्छ । त्यसो हुदा विगतमा जनवर्गीय संगठनका सवालमा कार्यदलहरुले दिएको रिपोटलाई आधार वनाएर अलग्गै मापदण्ड वनाएर एकताको काम टुगो लगाउने काम हुन्छ ।
आज पार्टी स्थापना दिवसको कार्यक्रममा जिल्ला अध्यक्ष र सचिवको नाम सार्वजनिक हुन्छ ?
हो । त्यही तयारी छ ।
"अष्ट्रेलिया गुणस्तरीय शिक्षाका लागि विश्वभर प्रख्यात मुलुक हो"
आफ्नो रुचिको विषय, आफुले अध्ययन गर्न लागेको शैक्षिक संस्था, जान मन लागेको स्थानबारे पर्याप्त रिसर्च...
‘घातक रोग थालेसेमियाको जोखिममा छन् बालबालिकाहरु’
थालेसेमिया आणुवंशिक अर्थात् वंशाणुगत रुपमा एउटा पिँढीबाट...
‘भरतपुरलाई बगैँचाको सहर बनाउने दौडानमा छु’
सरसफाइ एवम् हरियाली प्रवद्र्धन कार्यक्रमको मुख्य लक्ष्य...
सुरक्षाको कारण रंगशाला निर्माण कार्य रोकिँदैन : प्र.उ. मल्ल (अन्तर्वार्ता)
प्रहरी उपरीक्षक दानबहादुर मल्ल सुरक्षा व्यवस्था चुस्त...
यस्तो छ शी जिनपिङको संघर्षशील राजनीतिक जीवन
सी बस्नको लागि सोल्टी होटल पूरै रिजर्भ, कति लाग्छ भाडा ?
१. राष्ट्रपति सीको मुहारमा देखिएको त्यो मन्द मुस्कान
२. दरबारमार्ग क्लब भिक्टोरीमा आगलागी
३. जापानमा आएको तुफानका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या २५ पुग्यो
५. रौतहटमा गोली हानेर एक युवकको हत्या
६. चियापानमा देउवाले भने– सीले मलाई चीन भ्रमण निम्तो दिनुभएको छ
७. कांग्रेसको चियापानमा प्रधानमन्त्रीले भने– देउवासँग मेरो ४५ वर्ष पुरानो सम्बन्ध छ
८. काँग्रेसको चियापानमा पुगेर प्रचण्डले भने– मलाई सहयात्रीहरुकै बीचमा आएको महसुस भएको छ
९. यात्रुबाट बढी सवारी भाडा लिने सवारीसाधन कारवाहीमा
१. महरा प्रकरणमा सुवास नेम्वाङको ‘कुटिल चलखेल’
२. यस्तो छ शी जिनपिङको संघर्षशील राजनीतिक जीवन
३. सी बस्नको लागि सोल्टी होटल पूरै रिजर्भ, कति लाग्छ भाडा ?
४. गलत समाचार लेख्नेविरुद्ध सांसद पौडेलले उजुरी दिने
५. चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई दिइने रात्रीभोजमा जानेलाई परराष्ट्रको सातबुँदे शर्त
६. नेकपा माओवादी केन्द्रले भन्यो– महरा प्रकरणमा प्रम ओली, सुवास नेम्वाङ र ओनसरी घर्तीको षड्यन्त्र हुनसक्छ
७. चिनियाँ राष्ट्रपति आउँदा विमानस्थलमा जे देखियो (फोटोफिचर)